जसले ट्रेलरबाटै ‘राइजिङ स्टार’को लक्षण देखाए « Ramailo छ
जसले ट्रेलरबाटै ‘राइजिङ स्टार’को लक्षण देखाए
समय : 7:50 am
फिल्म प्रदर्शन अगावै यतिबेला फिल्म नगरीमा दुई नव नायकलाई ‘उदाउँदो तारा’को रुपमा हेरिएको छ । ‘ए मेरो हजुर २’ बाट सलिनमान बनियाँ र ‘ग्याङस्टर ब्लुज’बाट आशिरमान देशराजलाई ‘राइजिङ स्टार’को रुपमा धेरैले लिएका छन् । आशिर र सलिन यस्ता भाग्यमानी एक्टर हुन् जसले फिल्मको ट्रेलरबाटै हाइप पाइरहेका छन् । तर यी दुई नयाँ अनुहारलाई किन र कसरी हेरिंदैछ त ‘राइजिङ स्टार’को रुपमा ? यो बुझ्न आवश्यक छ ।
स्टारहरुको भिडमा कुनै पनि नव नायक तथा नव नायिकालाई ‘राइजिङ स्टार’को रुपमा हेरिनु चानचुने कुरा होइन । स्टार त्यो हो जसले दर्शकको ध्यान आफुतिर तान्न सफल हुन्छ । यसमा आरिश र सलिन सफल देखिएका छन् । जो कोही स्टार बन्दैन, कोही स्टार तब बन्छ जसमा अभिनय कौशल, अनुशासन, आत्मबल र उसको आवरण समेत आकर्षक छ । आशिर र सलिनमा यी गुणहरु देखिएका छन् । त्यसैले यी युवा जवानलाई नेपाली फिल्मको आशा लाग्दो नयाँ नायकको रुपमा हेरिएको छ ।
स्टार हुनु र हेरिनु फरक विधा हुन् । जोही कोहीले स्टार हुने क्षणक देखालान् तर केहीले मात्र स्टारको लाइनमा आफुलाई उभ्याउन सफल हुन्छन् । यसमा आशिरमान र सलिनमा कत्ति सफल हुन्छन् ? त्यो त फिल्म रिलिज पछि पत्ता लाग्नेछ । फिल्ममा उनीहरुको प्रस्तुती र फिल्मले गर्ने व्यापारले ‘स्टार’को स्टारडम निर्धारण गर्नेछ । भदौ २ गते ‘ग्याङस्टर ब्लुज’ र भदौ १६ गते ‘ए मेरो हजुर २’ प्रदर्शनमा आउँदैछ । आशिरमान र सलिनमानको ‘स्टारडम’ हेर्न यो मितिसम्म प्रतिक्षा गर्ने कि !